माधव नेपालको साथ छोडेका योगेशलाई ओलीवाट पनि धोका ? « Gaunbeshi
माधव नेपालको साथ छोडेका योगेशलाई ओलीवाट पनि धोका ?
काठमाडौं । नेकपा एमाले विभाजन हुनुहुँदैन भन्दै अन्तिम समयमा माधव नेपालको साथ छोडेर एमालेमै रहने निर्णय गरेका नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईलाई धोका भएको सार्वजििनक भएको छ । उनी माधव नेपालले नयाँ पार्टी दर्ता गर्न पुगेपछि ओलीको पक्षमा पुगेका थिए । पार्टीलाई २०७५ जेठ २ को अवस्थामा लैजानुपर्ने भन्दै वार्तामा गएका योगेश सहितका १० नेता आफुहरुको माग पुरा भएको भन्दै एमालेमा रहने निर्णयमा पुगेका थिए ।
तर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीका नेता योगेश भट्टराईमाथि ठूलो घात गरेका छन्। उनले योगेशलाई प्रवक्ताबाट हटाएका हुन्। माधव नेपालको साथ छाडेर अन्तिम समयमा एमालेमै बसेका योगेशलाई पार्टी प्रवक्ताबाट हटाइएको हो।
बिहिबार एमालेले दार्चुला तुईन घटनाबारे सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा भने प्रवक्ताको नाम योगेश भट्राई छैन । उक्त विज्ञप्तिमा प्रदीप ज्ञवाली प्रवक्ता भएको जनाइएको छ। दार्चुला प्रकरणमा एमाले पार्टीकै लेटरप्याडमा निकालिएको विज्ञप्तिमा प्रदीप ज्ञवालीको नाम प्रवक्ताको रूपमा उल्लेख गरिएको देखेपछि सामाजिक सञ्जालमा तरंग उत्पन्न भएको छ। माधव नेपाल पक्षका नेताहरुले ओलीले धोका दिएको प्रतिकृया दिएका छन् ।